China ALUMINUM Complex PANEL (FOR SIGNAGE) ifektri kanye nabaphakeli | I-Alucosun
I-Alucosun inikeza ukusebenziseka okuhle kakhulu kwemisebenzi ngemibala eminingi kanye nezinketho zokuqeda ezenziwe ngezifiso. I-Alucosun iphinde inikeze ukwethembeka ekusebenzeni okuhlala isikhathi eside kodwa okuguqukayo kanye nomongo. Ngaphezu kwalokho abamele i-Alucosun bahlala njalo kusevisi yamakhasimende ngolwazi lomkhiqizo lochwepheshe neziphakamiso ezifanelekile lapho kudingeka.
I-Alucosun izuze impumelelo enkulu ngokusungula okungapheli emikhiqizweni nasemisebenzini, njengoba kunjalo nangokuzibophezela kwakho empumelelweni yakho eminyakeni engama-20 edlule.
● Ubuso obushelelezi kakhulu nemibala ehlukahlukene:
Singahlinzeka ngemibala ye-RAL ne-Pantone, kufaka phakathi isicwebezelisi esiphakeme (85-95%), isicwebezelisi se-matt, isibhulashi, isibuko, nebhodi eliqediwe ngokhuni futhi elenzelwe izidingo zakho.
● Ubukhulu obuhlukahlukene:
Ububanzi busuka ku-1000mm kuye ku-2000mm. Ubude bungenziwa ngezifiso kuzidingo zakho ngaphezu kosayizi ojwayelekile ngokuya ngamasu wokucubungula.
● Ukumelana nokuphikiswa kwesimo sezulu okuphakeme kanye nokumelana nokuxubha:
Ukwelashwa ngaphezulu kwesicelo sebanga eliphakeme le-ultraviolet-resistant polyester paint (ECCA), isiqinisekiso seminyaka eyi-8-10; uma usebenzisa upende we-KYNAR 500 PVDF, oqinisekisiwe iminyaka engu-15-20.
● Ukucubungula okulula nezindlela ezahlukahlukene:
Ingacutshungulwa ngezindlela ezahlukahlukene futhi ingacutshungulwa ngokusika, ukugoba, ukushaya isibhakela, ukunamathela nokudweba.
● Indawo enobungane:
Indawo yethu yokukhiqiza i-eco-friendly nokungcola okungu-zero
Aluminium isikhumba ukushuba
Ukushisa kwe-Thermal Deformation
I-0.102kcal / m.hr℃
I-coefficient yokukhulisa amandla omlilo
Ukusebenza kokumelana nokucindezela komoya
Izakhiwo Ezimele Amanzi
Langaphambilini China OEM Izinkuni Umbala Acp - Alucosun PE - Alucosun
Olandelayo: I-ALUMINUM PANEL LATTICE
Iphaneli Ehlanganisiwe Ye-Aluminium 3mm
Ama-Aluminium amaPhaneli wePhaneli elihlanganisiwe
Iphaneli Ehlanganisiwe Ye-Aluminium Honeycomb
Aluminium Panel Aluminium Composite
Iphaneli yokumboza i-Pe Aluminium Composite